Hiadiana amin’ny COVID-19 ao Myanmar, antso iray hampitsaharana ny ady sy ny fanapahana aterineto ao amin’ny faritra Arakan · Global Voices teny Malagasy
Mibahana ny fahazoana vaovao momba ny COVID-19 ny fanapahana aterineto
Voadika ny 30 Avrily 2020 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, Français, Español, English
Topimaso jeografika an'ireo tanàna ao avaratr'i Arakan, izay voabahana ny aterineto. Sary avy amin'ny EngageMedia
Ity lahatsoratra nasiam-panovàna ity dia an'i Kyaw Lynn ary avy ao amin'ny EngageMedia, fikambanana iray momba ny media, teknolojia ary kolontsaina, tsy mitady tombontsoa. Naverina navoaka eto amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Zahao ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraika erantanin'ny COVID-19.
Loharano voalohany ny aterineto hakàna torohay momba ny valanaretina COVID-19 manerantany. Nefa amin'izao fotoana izao i Arakan (izay fantatra fahiny tamin'ny hoe Fanjakan'i Rakhine) any andrefan'i Myanmar dia mizaka ny iray amin'ireo fahatapahana aterineto naharitra ela indrindra teto ambonin'ny tany. Arakan no faritra faharoa mahantra indrindra ao Myanmar manana fotodrafitrasa tsizarizary momba ny fahasalamàna. Niteraka tsy fahampian'ny fahalalàna sy ny torohay momba ny COVID-19 ihany koa ny fibahanana ny aterineto.
Ny 21 Jona 2019 no voalohany nampiharana ny fanapahana aterineto tany aminà vakimparitra efatra tao avaratr'i Arakan. Vakimparitra dimy hafa, anisan'izany ny iray ao akaikin'ny Fanjakan'i Chin, no nanaraka tamin'ny 3 Febroary 2020. Midika izany fa maherin'ny 330 andro izao no efa lasa hatramin'ny andro voalohany nizakan'ireo faritra efatra ny tsy fisiana aterineto, ary efa ho 100 andro ho an'ireo vakimparitra taty aoriana.
Antony maro samihafa no naroson'ny governemanta momba ilay fanapahana, toy ny hoe fisorohana ny kabarim-pankahalàna sy ny fandisoana vaovao, ary ny tsy filaminana noho ny fifandirana misy ao amin'ny faritra. Tsy misy na iray aza azo hamarinina ny amin'izany.
Ny toedraharaha ao Arakan
Na miady amin'ny valanaretna COVID-19 aza izao tontolo izao, maherin'ny iray tapitrisa ireo olona ao avaratr'i Arakan no notsinontsinoavin'ny governemanta. Tamin'ny 19 Aprily, 107 ny tranga voamarina ary dimy no matin'ny coronavirus tao Myanmar. Tsy nilaza fisiana tranga ao Arakan mihitsy ny governemanta ao Myanmar. Saingy mety hitombo haingana io tarehimarika nasiônaly io.
Izany tokoa, misy sisintany ifampizaran'i Arakan amin'i Bangladesh izay ahitàna 2.456 tranga voamarina ary fahafatesana 91 hatramin'izao. Raha tsy miatrika ny zavamisy ireo manampahefana ao Myanmar, dia hijanona ho mpampita aretina ao amin'ilay faritra manamorona ny sisintany i Arakan.
Ny mampiavaka an'i Arakan dia izy misy ady mitampiadiana amin'izao fotoana izao, ifanaovan'ny tafi-panjakan'i Myanmar sy ny tafika mitampiadiana ao Arakan, na nanambara samirery ny fampitsaharana poabasy mandrapahatongan'ny faran'ny Aprily aza ireto farany noho ny hafatrafatry ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana mba hisian'ny fampitsaharana poabasy erantany. Ireo mpandalina sasany dia miampanga ny tafika avy ao Myanmar ho miezaka ny maka tombony ara-tafika ao Arakan amin'ny fanatanterahana hetsika fanafihana ara-miaramila, izay miteraka fahafatesana bebe kokoa eny anivon'ireo olontsotra tsy manantsiny. Teo anelanelan'ny fanombohan'ny Janoary sy ny 15 Aprily 2020, ny Ivontoeran'ny Fampahalalambaovao ao Arakan dia nilaza fahafatesan'olontsotra 377, faharatràna, na fanjavonana. Ny ankamaroan'izy ireny dia vehivavy sy ankizy.
Niteraka fifindramonina anatiny (IDP) ho an'olona manodidina ny 200.000 ilay fifandirana ao amin'ny faritra, ny maro amin'ireo dia miaina anaty toby tsy misy toeram-pialofana voatsangana ara-dalàna sy fitsinjaràna sakafo tsara tantana. Ny tsy fanajàna ny elanelana ara-tsosialy any anatin'ireo toby IDP, ny tsy fahampian'ny rano ary ny tsy fahampiana torohay momba ny COVID-19 dia samy mahatonga avokoa fahasarotana amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus ao amin'ilay faritra.
Indrisy, ireo fanafihana ataon'ny tafika amin'ny olona fa tsy amin'ny COVID-19 no miteraka tahotra eny amin'ny olona. Toa mafana fo ery ny governemanta ao Myanmar sy ny tafika amin'ny fiadiana amin'ny tafika ao Arakan fa tsy ny COVID-19 ao amin'ny faritra. Saingy eo ambanin'io fanamby telo loha io: fanakatonana ny aterineto, ny toedraharaha mampalahelo any anatin'ireo toby IDP, ary ny fifandonana mitampiadiana misy ankehitriny — mety vao mainka hiharatsy ny toedraharaha ao Arakan, iray mety hamely mafy mihitsy ny COVID-19 atsy ho atsy.
Ny hafatro: “Atsaharo ny ady sy ny fanapahana aterineto”
Mandritra ilay valanaretina erantany, ilaintsika ny mampitsahatra ny ady sy ny fanapahana aterineto mba hiadiana amin'ny COVID-19 ao Arakan.
Iray amin'ireo olona manandra-peo aho, na dia miafina ny fanenjehan'ny pôlisy aza aho amin'izao fotoana izao. Ny 23 Febroary 2020, tao Yangon, izaho no nitarika ny hetsipanoheran'ny Fikambanan'ny Mpianatra nanoherana ny fanapahana ny aterineto sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any amin'ireo faritra mizaka fifandirana ao Arakan. Mety higadra iray volana arahana asa an-terivozona aho raha voaheloka eny amin'ny fitsaràna.
Saingy raharaha ahy manokana io. Ny tena zavadehibe tokony hifantohana izao dia ny ady amin'ny COVID-19. Mihoatra ny iray tapîtrisa ireo olona ao Arakan no marefo ara-pahasalamàna mety hahazo ilay aretina raha toa isika tsy mampitsahatra ny ady sy ny fanapahana aterineto.
Araka izany, ndeha isika hiteny hoe: Atsaharo ny ady sy ny fanapahana aterineto mba hiadiana amin'ny COVID-19 ao Arakan. Hery ho anay ny fandraisanareo anjara. Fahasahiana ho anay ny fifantohanareo. Ny teninareo no filànay.
*Amin'izao fotoana izao i Kyaw Lynn dia mpianatra taona fahatelo ary manana ny diplaoma Masters amin'ny siansa politika avy amin'ny oniversiten'i Yangon, Myanmar. Izy no filohan'ny Fikambanan'ny Siansa Politika (Oniversiten'i Yangon) no sady manampahefana lehiben'ny Fikambanan'ny Mpianatra ao Arakan (Ireo Oniversite ao Rangoon).